Real Madrid Oo Cadhadii Waqtigii Adkaa Kula Soo Dhacday Kooxda Real Valladolid Oo Gool Kaga Hormartay, Karim Benzema Oo Laba Gool Dhaliyay-Miyuu Solari Kulankiisii Ugu Danbeeyay Maamulay Madrid? | Hohad News
Real Madrid Oo Cadhadii Waqtigii Adkaa Kula Soo Dhacday Kooxda Real Valladolid Oo Gool Kaga Hormartay, Karim Benzema Oo Laba Gool Dhaliyay-Miyuu Solari Kulankiisii Ugu Danbeeyay Maamulay Madrid?
Real Madrid ayaa tubta guusha ku soo laabtay kadib markii ay guul soo laabasho ah ka soo gaadhay kooxda Real Valladolid oo gool kaga hor martay. Karim Benzema ayaa laba gool kulankan ka dhaliyay halka Raphael Varane iyo Luka Modric ay min hal gool dhaliyeen.
Dhamaadkii ciyaarta Casemiro ayaa kaadhka laabad ee digniinta ah iyo kaadhka cas laysku raaciyay isaga oo seegi doono kulanka horyaalka la Liga ee soo socda.
Inkasta oo kooxda Real Valladolid ay qaybtii hore ee kulankan bandhig wayn samaysay isla markaana ay gool kaga hor mareen Madrid haddana Los Blancos ayaa qaybtii labaad ee ciyaarta soo bandhigtay bandhig wayn si ay uga soo dhex baxaan dhibaatadii ay ku soo jireen.
Santiago Solari oo wararku sheegayaan in shaqada laga caydhin doono ayaa guul wayn la soo gaadhay Real Madrid wax lagu tilmaamay in uu noqon doono kulankiisii ugu danbeeyay ee Los Blancos.
Kaydka: Jesus Vallejo, Cristo Gonzalez, Federico Valverde, Brahim Diaz, Marcelo, Keylor Navase, Jaime Seoane.
Kaydka: Javi Moyano, Daniele Verde, Enes Unal, Duje Cop, Yoel Rodriguez, Pablo Hervias, Moises Delgado.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid dhacdooyin badan lahayd isla markaana ay labada kooxood shaqo badan ku qabteen laakiin kooxda Real Valladolid ayaa qaab ciyaareed cajiib ah kala hortimid kooxda Santiago Solari ee Los Blancos oo kulankan iskeentay iyada oo aan kalsoonidii looga bartay haysan.
Daqiiqadii 12 aad kooxda Real Valladolid ayaa rekoodhe lagu abaal mariyay kadib markii Odriozola lagu ciqaabay in uu qalad ku galay Plano laakiin kooxda martida loo ahaa ee Valladolid ayaa iska lumisay fursadan iyada oo Rubén Alcaraz uu kubbada dul mariyay goolhaye Courtois!.
Daqiiqadii 15 aad Real Valladolid ayaa shabaqa Real Madrid soo taabtay kadib markii uu Keko kubad ka helay dhinaca midig ee xerada ganaxa kaas oo la si ciyaaray Guardiola laakiin goolka ay Valladolid u dabaal degtay ayaa noqday mid aan sii jirin kadib markii muuqaal caawiyaha garsoorka VAR lagu diiday isla markaana lagu sheegay in Keko uu offside ku jiray.
Real Valladolid ayaa lumisay laba fursadood oo ay u arkeen in ay laba gool ku dhalin kareen waxayna wali sii wateen culayska layaabka leh ee ay Real Madrid ku hayeen.
Daqiiqadii 18 aad Real Valladolid ayaa markale laga diiday gool uu dhaliyay Guardiola kadib markii uu kubbad ka helay Michel waxaana markan xaamasad waali ahi ay ka dhalatay garoonka Jose Zorrilla laakiin natiijada ciyaarta ayaa wali gool la’aan sii ahayd inkasta oo Valladolid ay waxyaabo layaableh heshay.
Daqiiqadii 29 aad ugu danbayn kooxda martida loo ahaa ee Real Valladolid ayaa gool sharci ah la timid kadib markii uu Anuar Tuhami awooday in uu gool u sarifay kubbad caawin uu ka helay xidigii nasiib xumadu goolashii diiday ee Sergi Guardiola waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Valladolid hogaanka ku qabtay.
Real Madrid ayaa bilawday in ay dagaalanto isla markaana ay raadiso goolkii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd waxayna ciyaartu noqotay mid xamaasad badan oo ay labada kooxoodba dadaal samaynayeen.
Daqiiqadii 34 aad Real Madrid ayaa ciyaarta ugu soo laabtay goolka barbaraha kadib markii uu Raphael Varane dhaliyay goolkan iyada oo koorne uu Toni Kroos soo tuuray uu Casemiro soo joojiyay isla markaana uu Nacho Fernandez kaga awood batay Masip waxaana ugu danbayn goolka dhaliyay Varane si uu ciyaarta uga dhigo barbaro 1-1 ah.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayay Real Valladolid soo bandhigtay qaab ciyaareed ay goolal dhawr ah ku dhalin kartay inkasta oo Real Madrid ay heerkii looga bartay ka hoosaysay waxaana qaybtii hore lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Real Madrid soo iyada oo dhaarsan isla markaana dar dar cajiib ah ku socotay waxayna markiiba dhibaato badan ku abuurtay kooxda Real Valladolid oo qaybtii hore iska caabin wayn soo bandhigtay.
Daqiiqadii 51 aad Karim Benzema ayaa kooxdiisa Real Madrid u dhaliyay goolka labaad ee ay natiijada ciyaarta dhinaca kale ugu dhigeen kaas oo ahaa rekoodhe qaladkiisa lagu galay Odriozola wuxuuna Benzema ciyaarta ka dhigay 2-1 ay Madrid markeeda hogaanka ciyaarta ku qabtay.
Daqiiqadii 59 aad Karim Benzema ayaa gool qurux badan oo madax ah ku dhaliyay kubbad uu Toni Kroos koorne ka soo tuuray isaga oo markan awooday in uu kooxdiisa Madrid siiyay fursada ay laba gool hogaanka ugu qabtay wuxuuna goolkani ahaa mid sii niyad jabiyay Real Valladolid oo aan qaybtii hore ahayn kooxdii ay qaybtii hore ahayd.
Daqiiqadii 74 aad Solari ayaa ciyaarta ka saaray Toni Kroos wuxuuna soo galiyay da’yarka Valverde kaas oo markiiba helay fursad uu gool ku dhalin lahaa balse ay difaaca Valladolid ka beeniyeen.
Daqiiqadii 77 aad Real Valladolid ayaa birta ku garaacday darbo goolkooda labaad loo fishay waxayna Madrid ka badbaaday goolka markale ciyaarta dib ugu soo celin gaadhay Valladolid iyada oo Verde uu arkay nasiib xumadii kooxdiisa oo halkeeda ka si socotay.
Daqiiqadii 80 aad Casemiro ayaa kaadhka cas loo taagay kadib markii uu si sahlan ku qaatay kaadhka labaad ee digniinta ah isaga oo is hortaagay kubbad laaga xorta ah oo ay Valladolid tuuran lahayd wuxuuna garsooruhu ciyaarta ka saaray Casemiro.
Daqiiqadii 85 aad Real Madrid ayaa goolkeeda afraad si qurux badan u heshay kadib markii uu Luka Modric dhamaystiray kubbad caawin uu ka helay Karim Benzema kaas oo saddex gool oo ka mid ah afarta gool ee Madrid ku lug yeeshay waxayna ciyaartu noqotay 4-1 ay Madrud ku dubanayso Valladolid.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 ay Real Madrid ku soo xasuuqday kooxda Real Valladolid isla markaana ay ugu danbayn Los Blancos tubta guusha ugu soo laabtay.